Firy ny boky azontsika vakiana ao anatin'ny herintaona? Matematika milaza fa 200 | Ireo mpamaky rehetra
Firy ny boky azontsika vakiana ao anatin'ny herintaona? Matematika milaza fa 200
Villamandos | | Nohavaozina tamin'ny 13/02/2017 12:01 | boky
Ny famakiana dia endrika fialamboly ho an'ny olona maro, fa koa fomba iray hahatongavana ho hendry kokoa. Izy io koa dia mitazona ny ati-dohantsika hanana endrika mandroso ary mandroso ara-tsaina tsy misy ezaka be sy mankafy ireo tantara atolotry ny boky maro antsika.
Mampalahelo fa matetika isika dia tsy manana fotoana be loatra amin'ny andavan'andro hankafizantsika ny famakiana, ary izany no antony nipoitra ny fanontaniana izay manome ny lohatenin'ity lahatsoratra ity ary tsy iza izany fa ny isan'ny boky azontsika vakiana ao anatin'ny iray anus ?. Matematika dia nanome valiny mahaliana antsika, tsy misy zavatra hafa ary tsy latsaky ny boky 200.
Charles Chu, manam-pahaizana momba ny matematika dia namoaka lahatsoratra izay, noho ny fiasa matematika tsotra dia nasehony izany afaka mamaky hatramin'ny 200 ny boky isan-taonaNy fialan-tsiny tsy ananantsika fotoana atokana ho an'ity fialamboly ity dia tsy misy ilana azy na saika tsy misy dikany.
1 Ny statistika izay mitarika antsika ho afaka hamaky boky 200 isan-taona
2 Izao no fotoana anaovana matematika tsotra
3 Afaka mamaky boky 200 isan-taona ve isika Espaniola?
4 Hevitra malalaka
Ny statistika izay mitarika antsika ho afaka hamaky boky 200 isan-taona
Andao aloha hijery ny statistika izay nampiasaina hanatsoahana hevitra fa boky hatramin'ny 200 no azo vakina isan-taona;
Ny amerikana (na olon-kafa) dia afaka mamaky teny 200 ka hatramin'ny 400 isa-minitra
Ny ankamaroan'ny boky dia manana teny manodidina ny 50.000 eo ho eo, na dia tsy lazaina intsony aza fa misy boky misy teny maro kokoa ary vitsy kokoa aza, na dia tsy nanao salanisa aza izahay dia tsy ho vita ny manao kajy ireo.
Izao no fotoana anaovana matematika tsotra
Boky 200 x teny / boky 50.000 10 = teny XNUMX tapitrisa
Teny 10 tapitrisa: teny 400 / minitra = 25.000 minitra
25.0000 minitra: 60 =Ora 417
Raha toa tsy vitanao ny afaka mipetraka sy mankafy boky mandritra ny 417 ora isan-taona, dia tadidio fa ny ankamaroantsika dia mandany 1.642 608 ora hijerena fahitalavitra na XNUMX ora hijerena sy hifandraisana amin'ny tambajotra sosialy.
Afaka mamaky boky 200 isan-taona ve isika Espaniola?
Ity fandinihana ity dia manondro ny olona amerikanina avaratra, na dia mety hitatra amin'ny olona rehetra aza ny angona rehetra ary mazava ho azy koa amin'ny Espaniola. Raha mahay isika dia tsy midika hoe manao izany ary mihevitra bebe kokoa fa olona telo amin'ny folo ihany no milaza fa mamaky matetika. Betsaka ny olona tsy mahazo mamaky boky iray isan-taona akory mangataka azy ireo hamaky 200.
Na iza na iza dia afaka mamaky boky 200 ao anatin'ny herintaona, raha vantany vao manolo-kevitra izy ireo, na dia tsy maintsy mamaky ny boky tsirairay ao anatin'ny roa andro aza isika, zavatra tsy azo eritreretina raha miasa isika ary manana fialamboly hafa. Amim-pahatsorana, fa samy mahazo ny valiny tadiaviny ny tsirairay avy amin'ny fanontaniana napetrakay, fa hijanona amin'ny tsia isika, fa tsy ho an'ny Espaniôla ihany, fa ho an'ny olona avy amin'ny firenena rehetra.
Mino marina aho fa ny ankamaroantsika dia hahita fa tsy afaka mamaky boky 200 isan-taona, mihoatra ny zava-drehetra satria tsy manana ny fotoana rehetra tianay hatokana ho an'ny famakiana. Mahaliana ahy ny mandany fotoana maharitra amin'ny famakiana, indrisy fa ny zavatra isan'andro dia tsy mamela ahy hankafy famakiana mihoatra ny adiny iray isan'andro na kely aza. Rehefa mamaky koa aho dia te-hamaky miadana, hahatakatra na dia ny antsipiriany kely indrindra ary mankafy ny teny rehetra. Indraindray aho dia mandray naoty na manao an-tsoratra amin'ny boky mihitsy, zavatra izay tsy isalasalana fa manakana ahy tsy hamaky boky 200 ao anatin'ny taona.
Resy lahatra aho fa raha mampifantoka ny saintsika amin'izany isika dia afaka mamaky boky isan'andro, ary noho izany dia boky 365 isan-taona, nefa azo antoka fa tsy hankafy azy ireo na hankafy azy ireo toy ny tokony ho izy araka ny tokony ho izy. Ny tolo-kevitray dia ny hamakianao fahafinaretana nefa tsy hametraka tanjona hamaky boky maromaro ianao ary hiafara amin'ny famelana ny tenanao hiala amin'ny hatsaran'ny famakiana.
Mihevitra ve ianao fa afaka mamaky boky 200 ao anatin'ny herintaona ary mankafy azy ireo koa?. Lazao aminay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity fidirana ity, ao amin'ny forum na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay. Lazao anay koa hoe inona ny rakitsoratry ny boky novakianao tao anatin'ny herintaona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » General » boky » Firy ny boky azontsika vakiana ao anatin'ny herintaona? Matematika milaza fa 200
Eneko dia hoy izy:
Mitohy amin'ny fandidiana, ora 417: boky 200 = 2 ora sy 5 minitra isaky ny boky. Ary tonga amiko ny fanontaniana iray: adiny 2 fotsiny isaky ny boky? Izaho manokana dia tsy mamaky izany haingana.
Mamaly an'i Eneko
Gianfranca Camussi dia hoy izy:
Toa misy lesoka matematika vitsivitsy, satria tsy afaka mamaky boky ao anatin'ny 2 ora! Izaho manokana, taorian'ny nahitako bilaogy nametrahanao ny olanao namaky manokana, tamin'ny 2016 dia nanolotra boky 50 aho, ary nahatratra 52 aho, nahafinaritra ny famakiana. Ny olana dia ny tantara an-tsehatra maro, indrindra ireo tantara, tsy mandeha ambanin'ny pejy 700-800. Mazava ho azy, ny haingam-pandiniko dia nitombo tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny e-reader, izay ahafahako mamaky amin'ny toe-javatra tsy noeritreretina taloha.
Valiny ho an'i Gianfranca Camussi
Ny tsara indrindra dia ny mikendry ny hamaky boky farafahakeliny isan-taona. Ohatra, tamin'ity taona ity aho dia naka fanamby hamaky boky 40, ary mba hahaliana kokoa azy io, ny tsirairay dia tsy maintsy tafiditra ao anaty sokajy manokana (Boky nosoratan'ny olona miloko, boky misy resaka fitsangatsanganana, boky izay mandehana mivadika ho sarimihetsika). Tena nampiala voly tokoa izany ary manome karazany maro amin'ny famakiko. Manoro izany aho.
jcast10 dia hoy izy:
Salama, heveriko fa nisy lesoka tany ho any, na toa ahy izany. Azo inoana fa hanakaiky ny 30 mihoatra ny 200 isika ... Avelao aho hanazava: ny boky iray, mihoatra ny kely ny "mahazatra" dia misy teny 300 isaky ny pejy. Raha resaka teny 50.000 150 dia miresaka boky misy pejy 300 mahery izahay ... Tsy fantatro ny momba anao, fa raha ny amiko, mazàna mihoatra ny pejy 200 ireo boky novakiako. Ny lafiny iray hafa dia ny an'ny teny isa-minitra. Heveriko ho "ara-dalàna" ny fahaizako mamaky teny, zara raha mihoatra ny teny 100.000 isa-minitra. Miaraka amin'ireo angona rehetra ireo, raha misy tantara 330 (pejy 200) ny boky "mahazatra" ary mandeha amin'ny hafainganana 500 ppm isika, dia maharitra 8 minitra ny famakiana azy, na izay mitovy, saika adiny 3 sy sasany isaky ny boky ... Heveriko fa tena izy ireo. Raha apetratsika ny famakiana 4/11 ora iray isan'andro (tsy manam-potoana bebe kokoa aho), raha mamaky ny Alatsinainy ka hatramin'ny Alahady dia maharitra 33 andro isaky ny boky. Herintaona dia namaky boky 200 izahay. Tena lavitra ny boky XNUMX.
Dell Parsons dia hoy izy:
Tonga teto amin'ity pejy ity aho teo am-panomanana atrikasa famakiana nomerika. Nahasarika ny saiko ny zava-misy amin'ny fanovana ny famakiana ho fanontaniana aritmetika mifototra amin'ny fanisana ny teny, pejy ary ora. Raha ny fahitako azy dia zavatra hafa ny famakiana, hetsika tokony ho mahafinaritra izany nefa tsy mitaky ora na isa na karazany inona, miaraka amin'ny traikefa tsara kokoa dia handany fotoana bebe kokoa isika ary amin'ny faran'ny taona dia hamaky boky bebe kokoa isika , tsy maninona na misy boky folo na mihoatra. zato. Ny famakiana tsara iray dia tsy azo ihodivirana fa mitarika mankany amin'ny iray hafa; Raha mahita asa manamarika antsika isika, dia te hitady zavatra bebe kokoa avy amin'ny mpanoratra iray ihany, na avy amin'ny vanim-potoana mitovy, na hanadihady ireo fanamarihana nataon'ny mpanoratra izahay ary hitady lohanteny hafa mifandraika… Ny zava-dehibe dia ny kalitao fa tsy ny habetsany! !
Valiny amin'i Dell Parsons
Sasa dia hoy izy:
Ho avy aho amin'ny 1 Janoary 2020 hilaza aminao ny isan'ny novakiako
Mamaly an'i sasa
Ainhize dia hoy izy:
Tsy haiko hoe avy aiza ireo kajy ireo.
Araka ny statistikan'ny Goodreads, ny pejy antonony amin'ireo boky novakiako dia 350 (mihoatra kely, fa andao hodinihina). Raha ny zavatra novakiako, pejy 350 dia teny manodidina ny 100000.
TSY mamaky pejy 400 isa-minitra aho, manakaiky ny 250 (mihodina), ka andao hametraka 250.
Boky 200 x teny / boky 100.000 20 = teny XNUMX tapitrisa
Teny 20 tapitrisa: teny 250 / minitra = 80.000 minitra
80.000 minitra: 60 = 1333 XNUMX ora
Aiza aho no mahazo 1333 3 ora isan-taona hamakiana? Tsy maintsy namaky adiny telo sy sasany isan'andro aho, ary manam-potoana adiny iray mahery izao ...
Valio i Ainhize
Miankina amin'ny tsirairay sy ny fotoana malalaka ananan'izy ireo izany, amin'ny fialan-tsasatra, ao anatin'ny 2 andro dia novakiako ilay saga runer maze iray manontolo, ary tamin'ny herinandro ara-dalàna dia namaky ilay saga Harry Potter iray manontolo aho tao anatin'ny 5 andro, boky iray isan'andro isan'andro, ary eny ny herinandro dia sarotra momba ny 3 na tsia,
Miankina amin'ny boky, ny pejy ananany ary ny fotoana misy aho. Afaka mamaky boky iray na roa isan-kerinandro aho. Io silo misy pejy 500 mahery io dia naharitra kokoa saingy novakiako niaraka tamin'ny an'ny sasany. Mazava ho azy fa tsy mandray boky toy izany amin'ny fitateram-bahoaka aho mba hahafahako manana boky lava kokoa hody any an-trano sy ireo izay misy pejy vitsy kokoa ho an'ny bus, hamaky ao amin'ny valan-javaboary iray, hitondra any ...
Valiny tamin'i Iris
Tsy ny famakiana boky maro, raha tsy hoe misy kalitao, ankafizinao, ianaranao avy amin'izy ireo, sns.
Raha ny marina dia misy boky hafa mety hamonjy ahy.
Boky tantaram-pitiavana tonga lafatra 14 hankafizinao amin'ny Andron'ny mpifankatia
Amazon dia mampihena ny vidin'ny Kindle Paperwhite